Rooble oo burburin kara heshiiska qoyska ee Khaatka Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo burburin kara heshiiska qoyska ee Khaatka Itoobiya
Heshiiska qoyska ee Jaadka Itoobiya, ayaa guud ahaan burburi kara, haddii RW Rooble iyo Uhuru Kenyatta, isku af-gartaan in dib loo soo celsho, xiriirkii ganacsi ee labada dal.
MUQDISHO, Soomaaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa la filayaa inu berri booqasho ku tago maagaalada Nairobi ee dalka Kenya, kadib maarkii uu casuumaad ka helay Madaxweynaha waddankaas Uhuru Kenyatta.
Mid ka mid ah qodobbada la rumeysan yahay in labada dhinac ka wada-xaajoon doonaan ayaa ah, arrimaha gaanacsiga, oo uusan ka marneyn Khaadka Kenya, kaas oo haddii la isku af-garto meesha ka saari kara guud ahaan jaadka ka yimaada Itoobiya.
Bishii March 2020, Farmaajo iyo Kooxdiisa ayaa mamnuucay duulimaadyada caalamiga ah, oo ay ku jiraan diyaaradaha Jaadka ka keeni jiray Kenya, ka hor inta aysan dhamaadkii bishii Nofembar 2020, u yeerin Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), isla-markaana aysan raacdeyn danjiraha Kenya Lucas Tumbo.
Sida la wada rumeysan yahay mid ka mid ah, qodobada Farmaajo, ugu raftay xiriirkaa diblumaasiyaadeed ee Kenya ayaa ah, in qoyskiisa iyo koox saaxiibadiis ah uu u xiro ganacsiga Khaadka, maadaama ay yaaraatay lacgihii deeqaha ahaa ee la boobi jiray.
Wax ka yar hal isbuuc, Kadib markii la raacdeeyay safiirkii Kenya, waxaa garoonka Aadan Cadde, soo caga-dhigatay diyaaradda National Airways of Ethiopia, oo sidda Jaadka HAREERI, taas oo dhalisay in shaacabka Soomaaliyeed is weydiiyo sababta ay Kooxda Farmaaajo ku kala jeclaadeen maandooriyaha labadaa daal.
Waxaaa isla xilligaas bannaanka u soo baxay dareen la qabay oo ahaa in Farmaajo macaash ka raadin doono, ka ganacsiga qaadka, nasiib-wanaagse, waxaa la ogaaday in walaalka Farmaajo oo loo yaqaan Xasan Cabdullaahi Farmaajo, ‘Xasan Nuur’ iyo koox saaxiibo la ah laagu naas-nuujiyay heshiiska daroogada Itoobiya lagu keenayo dalka.
Kooxda qaadka ka keenta Itoobiya oo ay ka mid yihiin Wasiirkii hore ee Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad ‘Oomaar’ iyo Guddoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir, Cali Cabdi Wardheere ‘Cali Yare’, ayaa qiimaha jaadka ka dhigay mid aad u sarreeya, waxayna taasi sababtay bannaan-baxyo ay dhigeen ganacsatada sii qeybisa qaadka oo gabi ahaanba Ra’iisul Wasaaraha ka codsaday in la mamnuuco maandooriyahaa Itoobiya.
Haddaba, heshiiska qoyska ee Jaadkaa Itoobiya, ayaa guud ahaan burburi kara, hadii RW Rooble iyo Uhuru Kenyatta, isku af-gartaan in dib loo soo celsho, xiriirkii ganacsi ee labada dal.
Baaritaan ay sameysay keydmedia Online, ayay ku ogaatay in qaadka Kenya, aad looga qiimeeyo Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya, marka loo eego, midka Itoobiya,
Hesheeskii qaadka Kenya ayaa ahaa mid furan oo aan cid gooni ah u xirneyn, halka midka Itoobiya uu u xiran yahay shaqsiyaad tiro yar oo malaayiin dollar ka faa’iiday ku dhawaad sanad-kii uu imaanayay dalka.